Guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka Baarlamanka labaad ee Galmudug oo diyaarinaya habraaca doorashada. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka Baarlamanka labaad ee Galmudug oo diyaarinaya habraaca doorashada.
Galmudug(WMN)_Xubnaha Baarlamanka Galmudug ayaa fadhi ay shalay ku yeesheen Dhuusamareeb ku doortay guddi suurta geliya doorashada guddoonka Baarlamanka labaad ee Galmudug kaasoo ka kooban 15 xubnood.
Guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka Baarlamanka labaad ee Galmudug oo diyaarinaya habraaca doorashada. was last modified: January 13th, 2020 by Siid Cali
Akhriso:-Guddiyada Joogatada ee golaha Shacabka oo maanta shaaciyay xilliga uu si rasmi ah u furmayo Kalfadhiga 5aad ee baarlamaanka Soomaaliya